Xfce သည်၎င်း၏နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲသည်။ ယခုတွင် Xfce 4010 နှင့် Xfce 4.10 မဟုတ်ပါ Linux မှ
Xfce သည်၎င်း၏နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲသည်။ ယခုတွင် Xfce 4010 နှင့် Xfce 4.10 မဟုတ်ပါ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, NOTICIAS
သူတို့ကပဲအတွက်ကြေညာခဲ့သည် Xfce ဘလော့ဂ် အသစ်ဖြန့်ချိမည့်အချိန်ဇယားအသစ်နှင့်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၎င်း၏နံပါတ်ပြောင်းလဲခြင်း။
အပြောင်းအလဲသည်ကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာအချို့ဖြန့်ဝေမှုများသည်နံပါတ်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပconflictsိပက္ခဖြစ်နိုင်သည်။ အဆုံးမှာတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်များရတာလဲဆိုတာနားမလည်ပေမယ့်လက်တွေ့ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်။
အထုပ်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့ xfce4-panel ကို -4.10 နှင့် debian နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့သည်ဖော်ပြထားသောအထုပ်၏ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အတူဗားရှင်းကိုထုတ်ပေးသည်၊ ဥပမာ - xfce4-panel ကို -4.10-1။ ပို့စ်တွင်ပြောထားသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဒီဂရီအမှတ်ပြီးနောက်ဒdecimalမနောက်လိုက်သောကိန်းဂဏန်းကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောကြောင့်0သည် update နံပါတ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ 4.1 အရာထက်နည်းသည် 4.8.
နောက်ဥပမာတစ်ခုကနံပါတ်ဖြစ်တယ် kernel: ၀.X။ la X ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအသစ်သော update ကိုနှင့်အတူအစားထိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့်, Xfce ဗားရှင်းကိုမသွားနိုင်ပါ 4.10အဲဒါဟာစတင်တာနဲ့တူလိမ့်မယ် Xfce 4.1.0။ အဖြေ? ကောင်းပြီဆိုရင်ငါတို့ရလိမ့်မယ် Xfce 4010 (လေးထောင်တစ်ဆယ်).. သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
အပြီးသတ်လွှတ်ပေးရေးကိုအဆုံးတွင်ဆိုင်းငံ့ထားသည် FOSDEMအဖြစ်အပျက်ဆွေးနွေးမှုများကျော်ပြီးနောက်အရာအသစ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်အဖြစ်။ စတင်ချိန်ဇယားသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ရက်စွဲများ အဆင့် / နောက်ဆုံးနေ့ လူတိုင်း၏တာဝန်များ အဖွဲ့တာဝန်များဖြန့်ချိ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
2011-Feb-13 - ၂၀၁၂ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့် ပံ့ပိုးမှုစင်တာ Xfce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါ hacking
၂၀၁၂ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ - ၂၀၁၂ .ပြီ ၁ ရက် လွှတ်ပေးရန်အဆင့် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြုလုပ်ပါ၊ ဆန္ဒရှိလျှင်ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းများကိုလွှတ်လုပ်ဆောင်ပါ
Xfce 4010pre1 (Featureze Freeze) ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များကိုပြင်ဆင်ပါ၊ Xfce 4010pre1 ကိုလွှတ်လိုက်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်မှုဖြန့်ချိမှုသည်ပုံသဏ္goodာန်ကောင်းမွန်ပြီးတင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ
၂၂ မတ်လ ၂၀၂၀ Xfce 4010pre2 (String Freeze) ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များကိုပြင်ဆင်ပါ၊ Xfce 4010pre2 ကိုလွှတ်လိုက်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်မှုဖြန့်ချိမှုသို့မဟုတ်မာစတာတွင်ကြိုးများသည်ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာပါစေ
၂၂ မတ်လ ၂၀၂၀ Xfce 4010pre3 (ကုဒ်အေးခဲခြင်း) ဖြန့်ချိရန်ကြေငြာချက်များပြင်ဆင်ပါ၊ Xfce 4010pre3 လွှတ်လိုက်ပါ, ELS ဌာနခွဲများကိုဖန်တီးပါ နောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်မှုဖြန့်ချိမှုကောင်းသောပုံသဏ္,ာန်ရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ (သို့) မာစတာတွင်ထိုကုဒ်သည်အစိုင်အခဲ / ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာသေချာပါစေ
၁၉ 2012ပြီ -၂၀၂၀ Xfce 4010 (နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်) အခမ်းအနားကျင်းပ ဖြန့်ချိသည့်ကြေညာချက်များကိုပြင်ဆင်ပါ၊ တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဌာနခွဲဖြစ်သော Xfce 4010 ကိုလွှတ်လိုက်ပါနှင့် ELS ဌာနခွဲများကိုမာစတာဘ်သို့ပေါင်းစည်းလိုက်ပါ ဤနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းအသစ်များလွှတ်တင်ရန်သေချာပါစေ
တိုတိုပြောရရင်၊ Xfce 4010 အတွက် 1 ဧပြီလ ????
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Xfce သည်၎င်း၏နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲသည်။ ယခုတွင် Xfce 4010 နှင့် Xfce 4.10 မဟုတ်ပါ
ငါထင်တာမှားနေတယ်၊ ​​ဘာလို့မင်းအရင်မစဉ်းစားခဲ့တာလဲ ဖြန့်ချိသောဗားရှင်းတစ်ခုစီတွင် ၁ ဒdecimalမနေရာရှိလျှင် ၄.၁၀ ဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုရင် ၁ အစားအစားဒdecimalမကိန်း ၂ ခု၊ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဗားရှင်း ၄.၁ သည် ၄.၀၁ နှင့် ၄.၁၀ သို့မဟုတ် ၄.၉၉ အထိအလိုရှိပါကဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြproblemနာက Xfce ကို ၅.၀ အောက်မှာမထုတ်ချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗားရှင်းရဲ့အဓိကအပြောင်းအလဲဟာအထင်အမြင်သေးတယ်။ ဥပမာ - KDE5.0 မှ KDE3 သို့ Gnome4မှ Gnome2အထိဖြစ်သည်။
သူတို့ကဗားရှင်း ၃၀ သို့သတင်းကောင်းမရှိဘဲထွက်ပေါ်လာသည့် Kernel ၏နမူနာကိုပေးသည်။
ငါသဘောတူတယ်၊ ငါပြောခဲ့တဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်အတွက်သူတို့လိုချင်တာကဒdecimalမဂဏန်းနှစ်လုံးရဲ့ nomenclature ကိုသုံးရတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့လိုချင်ရင် ၄.၉၉ အထိတက်နိုင်တယ်။
တစ်နည်းနည်းဖြင့်! စောင့်ဆိုင်းရန် မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါက1stပြီ ၁ ရက်မှာထွက်လာကတည်းကအပြစ်မဲ့တဲ့ဟာသမဟုတ်ဘူး။
နှောင့်နှေးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ FOSDEM သည် developer များမှအကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုများစွာထည့်သွင်းနိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုကိုသူတို့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိလျှင်နောက်ကျလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
GIMP အဖွဲ့လိုလူတွေဒီပိုပိုများလာတယ်။ စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါသည်။ တွေ့မြင်ခဲ့ရသောတိုးတက်မှုသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများကိုပြသသည်။
ငါထင်တာကတော့သူတို့ဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့ထုတ်ကုန် (အမြန်ဆုံး Gnome-Shell, Unity နှင့် KDE4 အကြောင်းပြောကြရအောင်) ထုတ်လွှတ်ဖို့အလျင်တဆောမကြိုးစားဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကအကောင်းဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုပေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ XFCE 4.8 တွင်အဆင်ပြေစွာစောင့်ဆိုင်းလိုသည်။ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၄၁၀ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၄၀410 မှာနည်းနည်းမလိုအပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
Xfce ကကျွန်တော့်ရဲ့ default desktop ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ version က bullshit လို့ထင်ပါတယ်။ 4.9.x ကိုလေးစားသင့်ပါတယ်။ 4.9.9 ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်5ကိုသွားပါ။ သမိုင်းမှာအများကြီးပါပဲ။ ၎င်းတို့ကို (ငါသည်လည်းပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း…) Firefox မှမှုတ်သွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အသစ်ပြင်ဆင်ထားသောအရာများနှင့်အတူ +1 ဗားရှင်းကိုဖြည့်စွက်သည်၊ ဥပမာ ၅ မှ ၆ မှ ၅ မှ ၆ ရုတ်တရက်အဆင့်၊ စသည်တို့ယခု beta ၌ရှိသော4သို့ရောက်ခြင်း ထိုအကောင်းစွာ, ပရိုဂရမ်မာ whims ။
Elav ၏အခြားမှတ်ချက်များမှကြည့်လျှင်၎င်းသည်မျှတမှုရှိသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ gnome မှလွတ်မြောက်လာသောသုံးစွဲသူများစွာကိုစုဆောင်းရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်တွင်ရှိနေရပါမည်။ ၎င်းတို့သည်ယခုစမ်းသပ်မှုနည်းသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူထိုသူများကိုမဆုံးရှုံးချင်ပါ။ အဲဒီလိုသာဆိုရင်၊ နည်းလမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းကြောက်လန့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်သည်ပညာရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဟုထင်မြင်မိသည်။
ဤ Xfce အသုံးပြုသူသည်လွှတ်တင်ရန်အေးဆေးငြိမ်သက်စွာစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်။
ရေတွက်ခြင်းစိတ်ကူးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။ Elav ရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အခြားစားပွဲခုံများသည်အသုံးပြုသူများကိုအလျင်အမြန်နှင့်စိတ်ပျက်ရန်မှားသည်။ Xfce အဖွဲ့သည်အင်္ဂါရပ်အသစ်များသို့မဟုတ်စူပါအင်္ဂါရပ်များကိုပြသရန်ဆန္ဒကိုမလိုက်လျောပါ။ သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကသူတို့မှာရှိပြီးသားအရာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Xfce 4.8 ကကောင်းတယ်၊ လာမယ့်ဗားရှင်းကိုလာမယ့်ဗားရှင်းအတွက်ငါတို့အသုံးပြုသူများသည်ဘာမြန်သနည်း။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသင်း၏ပြုမူပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အချက် (၂) ချက်ကိုကျွန်ုပ်ချီးကျူးသည်။ ပထမအချက်မှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ သူတို့သည်လွှတ်တင်မှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးအချိန်ပိုယူကြသည်။ ဒုတိယ၊ သူတို့သည်ပရိသတ်ကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိဘဲ၊ နှောင့်နှေးမှုများရှိနေသည့်တိုင်သူတို့သည်အမြဲတမ်းသူတို့၏မျက်နှာကိုပြသပြီးသတင်းကိုဘလော့ဂ်တွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေထားရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသော Xfce နှင့်ကျေနပ်ရော၊
SOPA ဥပဒေ, ရေခဲသေတ္တာ ... ယခု
Ubuntu 5.0 အတွက် Unity 12.04 ရရှိနိုင်သည်